နည်းနည်းပင်ပန်းလို့ ခဏနားတာ​တော့ရှိမယ် ​သွေး​အေး​နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ G fatt – Cele Posts
အဆိုတော် G Fatt ကတော့ တေးသီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရေးသား သီဆိုနေတဲ့ လူငယ်တေးသံရှင် တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ပီပီ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ G Fatt ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးက လေးစားနေကြတာပါ။
လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက်တွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် အမြဲရေးသားဝေမျှပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်ကလည်း G Fatt ရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့ လူငယ်တွေကို အပြစ်မမြင်ဘဲ အကောင်းဘက်ကတွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” နည်းနည်းပင်ပန်းလို့ ခဏနားတာ​တော့ရှိမယ် ​သွေး​အေး​နေတာမဟုတ်ဘူး ။ လူ​တွေ အသလွတ်သတ်​နေလို့ ဘယ်နည်းလမ်း​ကောင်းမလဲ ခဏစဉ်းစားတာလည်း ဖြစ်တယ် ။
ဒီမတရားမှုတွေအ​ပေါ် ​နေသားကျသွားစရာ အ​ကြောင်းမရှိဘူး။ လမ်း​တွေ အဖယ်ခံရတိုင်း ရင်ထဲက မတရားမှု​တွေက လမ်း​တွေလို ရှင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး ။ ရပ်ကွက်ထဲက ဒလန်​တွေလည်း မြဲမြဲမှတ်ထား ခင်ဗျားတို့လုပ်ရက်အတွက်ဘဝ​ပေး အသက်​ပေးလိုက်ရတဲ့ လူငယ်​တွေကိုယ်စား ကျန်တဲ့လူငယ်​ပေါင်းများစွာက ခင်ဗျားတို့ကိုဘယ်တော့မှကမ္ဘာမ​ကြေဘူး ။ ​ခေါင်းကိုချည်းတည်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့သူ​တွေလည်း နောင်တစ်ချိန် ဘယ်အ​ကြောင်းပြချက်​ပေး​ပေး ကျွန်​တော်တို့ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ဆို​တော့ .. စည်းလုံးမှုအားဟာ အရှိန်မကျပါဘူး ။
ကန့်လန့်လိုက်တိုက်မယ့် လူကြီး​တစ်ချို့ရှိ​ပေမယ့် တစ်ကယ်အားတက်သ​​ရော ပါဝင် ကြတဲ့ လူကြီး​တွေလဲ ဒုနဲ့​ဒေးပဲဘယ်သူကန့်ကွက် ကန့်ကွက် ကျွန်​တော်တို့က ဒီမတရားမှု​တွေကို တွန်းလှန်မှာပဲ ။ ကျွန်​တော်တို့ GZ ​​တွေကို ကာကွယ်​ဖေးမမယ် ။ သူတို့​အောင်ပွဲအတွက် ကျွန်​တော်တို့ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ စဉ်းစားဝန်းရံမယ် ။အား​ပေး​ဖေးမမယ် ။ လူကြီးတစ်ချို့လည်း အမြင်​ပြောင်း​စေချင်တယ် တစ်ခြားနိုင်ငံက လူငယ်တွေကို ​”တော်လိုက်တာ” “ထက်မြက်လိုက်ကြတာ” စသဖြင့် အားကျ ချီးကျူးဖူးတယ် မလား ? ကျွန်​​တော်တို့ဆီက က​လေး​တွေမှာလည်း အဲ့ထက်မ​လျော့တဲ့အရည်အချင်း​တွေရှိတယ် ၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်​​ယောက် မြင်တိုင်း Auto အထင်ကြီးစိတ်ဝင်တဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူး ။ရင်​ဘောင်တန်းပြမယ့် မျိုးဆက်ဖြစ်တယ် ။
ဒီအ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်လို့ ဒီမိုက​ရေစီရရင် ဒီနိုင်ငံကို သူတို့ လက်နဲ့ ဆွဲတင်ပြကြလိမ့်မယ် ။ ​စောင့်ကြည့်။ အဓိက​ပြောချင်တာ က​တော့ က​လေး​တွေကိုအား​ပေးပါ ၊ ကာကွယ်ပါ ၊ ဝိုင်း​စောင့်​လျောက်ပါ။ ဦး​လေးတို့အ​ကြောက်တရားနဲ့အန်တီတို့စိုးရိမ်စိတ်ကို ကျွန်​တော်တို့နားလည်ပါတယ် ။ ဒီပွဲမနိုင်နိုင်ဘူးလို့ ဦးတို့အန်တီတို့ ​ထင်​နေတာလည်း နားလည်ပါတယ် ။ဒါ​ပေမယ့် ကျွန်​တော်တို့က လူငယ်​တွေပါ ကျွန်​တော် တို့မှာ ယုံကြည်ချက်​တွေ​ရော အနာဂါတ်​တွေ​ရော အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်စွမ်း​တွေ​​ရော တိုင်းပြည်ကိုချစ်စိတ်​တွေ​ရော အပြည့်ရှိတယ် ။ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာကို ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိစေရန် အတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
နညျးနညျးပငျပနျးလို့ ခဏနားတာ​တော့ရှိမယျ ​သှေး​အေး​နတောမဟုတျဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ G fatt
အဆိုတျော G Fatt ကတော့ တေးသီခငျြးတှကေို ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးရေးသား သီဆိုနတေဲ့ လူငယျတေးသံရှငျ တဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူငယျပီပီ အမှနျတရားဘကျကနေ ရပျတညျပွီး လူထု လှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပူးပေါငျးပါဝငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကရြာအခနျးကဏ်ဍကနေ ကူညီဆောငျရှကျပေးနတေဲ့ G Fatt ကိုတော့ ပရိသတျတှေ အားလုံးက လေးစားနကွေတာပါ။
လကျရှိအခွအေနနေဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ သူ့ရဲ့ ထငျမွငျ ယူဆခကျြတှကေို လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာတှငျ အမွဲရေးသားဝမြှေပေးနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ ရကျပိုငျးလောကျကလညျး G Fatt ရဲ့ Facebook အကောငျ့တှငျ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော တကျကွှစှာပါဝငျနတေဲ့ လူငယျတှကေို အပွဈမမွငျဘဲ အကောငျးဘကျကတှေးပေးကွဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ” နညျးနညျးပငျပနျးလို့ ခဏနားတာ​တော့ရှိမယျ ​သှေး​အေး​နတောမဟုတျဘူး ။ လူ​တှေ အသလှတျသတျ​နလေို့ ဘယျနညျးလမျး​ကောငျးမလဲ ခဏစဉျးစားတာလညျး ဖွဈတယျ ။
ဒီမတရားမှုတှအေ​ပျေါ ​နသေားကသြှားစရာ အ​ကွောငျးမရှိဘူး။ လမျး​တှေ အဖယျခံရတိုငျး ရငျထဲက မတရားမှု​တှကေ လမျး​တှလေို ရှငျးသှားမှာမဟုတျဘူး ။ ရပျကှကျထဲက ဒလနျ​တှလေညျး မွဲမွဲမှတျထား ခငျဗြားတို့လုပျရကျအတှကျဘဝ​ပေး အသကျ​ပေးလိုကျရတဲ့ လူငယျ​တှကေိုယျစား ကနျြတဲ့လူငယျ​ပေါငျးမြားစှာက ခငျဗြားတို့ကိုဘယျတော့မှကမ်ဘာမ​ကွဘေူး ။ ​ခေါငျးကိုခညျြးတညျပဈခဲ့ကွတဲ့သူ​တှလေညျး နောငျတဈခြိနျ ဘယျအ​ကွောငျးပွခကျြ​ပေး​ပေး ကြှနျ​တျောတို့ခှငျ့လှတျမှာမဟုတျဘူး ။ ဆို​တော့ .. စညျးလုံးမှုအားဟာ အရှိနျမကပြါဘူး ။
ကနျ့လနျ့လိုကျတိုကျမယျ့ လူကွီး​တဈခြို့ရှိ​ပမေယျ့ တဈကယျအားတကျသ​​ရော ပါဝငျ ကွတဲ့ လူကွီး​တှလေဲ ဒုနဲ့​ဒေးပဲဘယျသူကနျ့ကှကျ ကနျ့ကှကျ ကြှနျ​တျောတို့က ဒီမတရားမှု​တှကေို တှနျးလှနျမှာပဲ ။ ကြှနျ​တျောတို့ GZ ​​တှကေို ကာကှယျ​ဖေးမမယျ ။ သူတို့​အောငျပှဲအတှကျ ကြှနျ​တျောတို့ ကိုယျစှမျးဉာဏျစှမျးရှိသမြှ စဉျးစားဝနျးရံမယျ ။အား​ပေး​ဖေးမမယျ ။ လူကွီးတဈခြို့လညျး အမွငျ​ပွောငျး​စခေငျြတယျ တဈခွားနိုငျငံက လူငယျတှကေို ​”တျောလိုကျတာ” “ထကျမွကျလိုကျကွတာ” စသဖွငျ့ အားကြ ခြီးကြူးဖူးတယျ မလား ? ကြှနျ​​တျောတို့ဆီက က​လေး​တှမှောလညျး အဲ့ထကျမ​လြော့တဲ့အရညျအခငျြး​တှရှေိတယျ ၊ နိုငျငံခွားသားတဈ​​ယောကျ မွငျတိုငျး Auto အထငျကွီးစိတျဝငျတဲ့မြိုးဆကျမဟုတျဘူး ။ရငျ​ဘောငျတနျးပွမယျ့ မြိုးဆကျဖွဈတယျ ။
ဒီအ​ရေး​တျောပုံ​အောငျလို့ ဒီမိုက​ရစေီရရငျ ဒီနိုငျငံကို သူတို့ လကျနဲ့ ဆှဲတငျပွကွလိမျ့မယျ ။ ​စောငျ့ကွညျ့။ အဓိက​ပွောခငျြတာ က​တော့ က​လေး​တှကေိုအား​ပေးပါ ၊ ကာကှယျပါ ၊ ဝိုငျး​စောငျ့​လြောကျပါ။ ဦး​လေးတို့အ​ကွောကျတရားနဲ့အနျတီတို့စိုးရိမျစိတျကို ကြှနျ​တျောတို့နားလညျပါတယျ ။ ဒီပှဲမနိုငျနိုငျဘူးလို့ ဦးတို့အနျတီတို့ ​ထငျ​နတောလညျး နားလညျပါတယျ ။ဒါ​ပမေယျ့ ကြှနျ​တျောတို့က လူငယျ​တှပေါ ကြှနျ​တျော တို့မှာ ယုံကွညျခကျြ​တှေ​ရော အနာဂါတျ​တှေ​ရော အမှားအမှနျခှဲခွားနိုငျစှမျး​တှေ​​ရော တိုငျးပွညျကိုခဈြစိတျ​တှေ​ရော အပွညျ့ရှိတယျ ။ ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာကို ပရိသတျတှလေညျး သိရှိစရေနျ အတှကျ တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။